Wararka Maanta: Talaado, Apr 16, 2019-Turkiga oo duuliyayaal cusub u tababaraya shirkadda Somalia Airlines
Wararka Maanta- Talaado, Apr 16, 2019
Turkiga oo duuliyayaal cusub u tababaraya shirkadda Somalia Airlines
Talaado, April, 16, 2019 (HOL) –Shirkadda Turkish Airline ayaa u balanqaaday dowladda Somaaliya in ay tababar siin doonto duuliyayaal cusub oo loo qaadan doono shirkadda diyaaradaha Somali Airlines iyadoo dhanka kalana tababar kooban (Refreshment) ah la siin doono qaar ka mid ah duuliyayaashii hore ee shirkaddii Somali Airlines.
Maareeye ku-xigeenka garoonka Adan Cadde, Capt. Ceydaruus Axmed Kaahiye oo la hadlay Hiiraan Online kuna matalayay dowladda Soomaaliya gaar ahaan Wasaarradda Gaadiidka iyo duulista hawadda ayaa sheegay in sharikadda Turkish Airlines ay balanqaaday tababarka duuliyayaal cusub oo loo qaadanayo shirkadda Somali Arilines kaa oo socon doona muddo labo sano ah, waxaa tababarka qeyb ka noqondoona gargaarayaasha diyaaradda (Air hostess).
Sidoo kale waxaa uu sheegay in muddo kooban tababar Refreshment la sii doono qaar ka mid ah duliyayaashii hore ee shirkadda.
Duuliyayaasha cusub ee la soo tababarayo ayuu sheegay Capt. Ceydaruus in laga soo xuli doono guud ahaan dalka Soomaaliya.
Arrintan ayaa ka danbeysay kaddib codsi ka yimid Wasaarradda Gaadiidka iyo Duulista hawadda dowladda Soomaaliya oo muddooyinkii ugu danbeeyayba ku howlaneyd sidii dib loogu soo celin lahaa adeegii shirkadda Somalia Ariline oo meesha ka baxday tan iyo wixii ka danbeeyay sanadkii 1991-kii.
Taliska Booliiska oo faah faahin ka bixiyay hub ay soo qabteen ciidamada dowladda
4/16/2019 1:34 PM EST
Talaado, April, 16, 2019 (HOL)–Taliye Ku-xiggeenka ciidamada Booliska Soomaaliyeed Sarreeye guuto Zakiya Xuseen Axmed oo shir jaraa’id ku qabatay magaaladda Muqdisho, ayaa warbaahinta sharaxaad ka siisay howlgalada amniga lagu sugayo ee ciidamada ammaanka ay ka wadaan Muqdisho.
Shirka wada-tashiga Wasaaradaha Boostada federaalka iyo dawlad-goboleedyada oo maanta Muqdisho ka furmay
4/16/2019 9:58 AM EST
Talaado, April, 16, 2019 (HOL)–Shirka wada-tashiga wasaaradaha boostada iyo isgaarsiinta ee federaalka iyo dawlad-goboleedyada ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho.
Hirshabeelle oo ku hanjabtay in ay furayaan dekedda Ceel Macaan
4/16/2019 9:02 AM EST
Talaado, April, 16, 2019 (HOL) –Maamulka Hirshabelle cabasho xooggan keenay habka loo qayb-saday Dhaqaalaha loogu talo galay ka hortagga masiibooyinka, islamarkaana Hirshabelle saami aad u yar laga siiyay, ayaa mas’uuliyiinta Hirshabelle, waxaa ay sheegeen haddii dowladda aysan wax ka qaban cabashadaasi in ay qaadayaan tallaabooyin.
Xisbiga WADDANI oo ka hadlay xaalada guud ee Somaliland ka jirta iyo dhaliilo uu usoo jeediyey xukuumadda
4/16/2019 7:44 AM EST
Talaado, April, 16, 2019 (HOL)–Xisbiga mucaaradka ah ee WADANI ayaa ka hadlay Mawqifka xisbiga ee arrimaha doorashooyinka, cabashada ka taaggan dhulka laga dhisayo madaxtooyada cusub iyo hoos u dhaca Doollarka ee aanay la jaanqaadin maceeshaddu.
Wasiirka cusub ee Wasaaradda Arrimaha Dastuurka oo xilka la wareegay
4/16/2019 7:40 AM EST
Talaado, April, 16, 2019 (HOL)–Xaflad uu xilka kula wareegayay Wasiirka cusub ee Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee XFS ayaa maanta ka dhacaday xarunta Wasaaradda.
Madaxweynaha Puntland, muxuu u sheegay jaaliyadda Imaaraadka?
4/16/2019 5:14 AM EST
Talaado, April, 16, 2019 (HOL) – Madaxweynaha Puntland ,Siciid Cabdullaahi Deni ayaa la kulmay jaaliyadda Puntland ee Imaaraadka Carabta. Munaasabaddan ayaa waxa kasoo qayb galay masuuliyiin ka tirsan Golaha xukuumadda Dowladda Puntland, qunsulka Soomaliya u fadhiya Imaaraadka, Maamulka Jaaliyadda Puntland ee Imaaraadka, Siyaasiyiin xilal kala duwan kasoo qabtay Puntland iyo Jaaliyadda Puntland ee Imaaraadka.
Ganacsade Soomaaliyeed oo xalay lagu dilay dalka Koonfur Africa
4/16/2019 2:45 AM EST
Talaado, April, 16, 2019 (HOL)–Wararka ka imanaya dalka Koonfur Africa ayaa sheegaya in xalay koox burcad ah ku dishay magaalada King Willaims Ganacsade Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Mukhtaar Cumar.
Madaxweyne Farmaajo oo xalay la kulmay saraakiisha Booliiska
4/16/2019 12:57 AM EST
Talaado, April, 16, 2019 (HOL)–Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay booqday xarunta taliska Booliiska Soomaaliyeed ayaa kulan gaar ah halkaa kula yeeshay saraakiisha ciidamada booliiska.
Dabeylo dad ku dilay dalka Mareykanka
4/16/2019 12:39 AM EST
Talaado, April, 16, 2019 (HOL)–Ugu yaraan siddeed ruux ayaa dhimatay kuwo kale oo badanna way dhaawacmeen ka dib markii ay dabayl xoog badan iyo roobab mahiigaanno ah ku dhufteen dhawr gobol oo koonfurta Maraykanka ku yaalla.
Mareykanka oo faah faahin dheeraad ah ka bixiyay duqeyn lagu dilay sarkaal ka tirsan Daacish
4/16/2019 12:34 AM EST
Talaado, April, 16, 2019 (HOL) – Faah faahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya duqeyn lagu dilay ku-xigeenka Ururka Daacish ee dalka Soomaaliya Cabdixakiin Dhocob, waxaana dilkan faah faahin dheeraad ah ka bixiyay taliska Mareykanka ee Africom,.
Puntland bans trade of weapons in its regions -HOL
4/16/2019 6:51 PM EST
Rep. Ilhan Omar raises $830K for re-election campaign -Star Tribune
4/16/2019 5:22 PM EST
Ambassador Jian: China firmly supports peace and development in Somalia -Chinese Embassy in Somalia
4/16/2019 12:00 PM EST
NUSOJ Mourns the Death of Veteran Somali Journalist in Kenya. -NUSOJ
4/16/2019 5:28 AM EST
Bluebird Aviation co-founder has filed a criminal complaint against other shareholders -Business Daily
4/16/2019 3:58 AM EST
'We're excluded from the table': Somali UN staff say they struggle in 'two-tier' aid sector -The Guardian
4/16/2019 12:35 AM EST
Saudi Arabia Funds Another Regional Conflict: Libya -Haaretz
4/16/2019 12:33 AM EST
Saudi Arabia is reportedly funding Khalifa Haftar's push to take Libya's capital of Tripoli
Ugandan Battlegroup Honoured For Outstanding Service In Somalia -AMISOM
4/16/2019 12:28 AM EST
Twitter left up Ilhan Omar death threats so law enforcement could investigate -Buzzfeed
4/16/2019 12:26 AM EST
Cuban doctors’ driver to be detained for 15 days -Standard Digital
4/16/2019 12:21 AM EST
A driver attached to two Cuban doctors will be detained for 15 days on suspicion that he planned and facilitated their abduction.
U.S. slaps sanctions on alleged new Islamic State financiers -AFP
4/16/2019 12:18 AM EST
WASHINGTON - The United States on Monday imposed sanctions on financiers with bases in Belgium, Kenya and Turkey on charges they funneled money internationally for the Islamic State extremist group.
Goodbye Kabul, Hello Mogadishu: Pentagon ramps up in Somalia, winds down in Syria -TMN
4/16/2019 12:14 AM EST
NHRC signs MoU with Somalia’s ministry -Gulf Times
4/16/2019 12:09 AM EST
National Human Rights Committee (NHRC) signed a memorandum of understanding (MoU) with Somalia’s Ministry of Women and Human Rights Development, on the sidelines of the second and final day of the conference titled “National, regional and international mechanisms to combat impunity and ensure accountability under the law,” organised by NHRC, in co-operation with the United Nations High Commissioner for Human Rights and the European Parliament.